Magaalaa Hirnaattis akkuma Awwadaay hiriirri mormii Qarree Qofaan Geggeeffame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMagaalaa Hirnaattis akkuma Awwadaay hiriirri mormii Qarree Qofaan Geggeeffame.
Magaalaa Hirnaattis akkuma Awwadaay hiriirri mormii Qarree Qofaan Geggeeffame.
KMN:- Hagaya 31/2020
Guyyaa kaleessaa Godina harargee bahaa magaalaa daldala jimaan beekkamtu fi sa’aatii 24 banaa jirtu Awwadaayitti hiriirri mormii mootummaa abbaa irree Itiyoophiyaa Qarree fi haadholii qofaan geggeefamaa oolee ture.
Isa kana hordofuun guyyaa har’aatis godinuma kana magaalaa Hirnaatti hiriirri Qarree fi Haawwoliidhaan geggeefamaa ooleera. Qabsoon karaa nagaa mootummaa kanarratti geggeefamaa jiru geggeessaa hawaasaatin bifa isaa jijjirrachaa itti fufeera.
Oromoon biyya alaa jira akka adunyaatti marsaa jalqabaaf hiriira Qarree fi haadholiin irratti hirmaatan Kan geggeessan yoo ta’u, guyyaa torbee darbes marsaa lammaaffaan biyya UK magaala Londonitti eegaleera.
Oduu Gaddaa! Gootichi gameessi wareegame.
Jaal Addunyaa Naggasuu Wallaga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii ganda Wanjoo keessatti guyyaa kaleessaa wareegame.
Jaal Addunyaan, abbaa qabeenyaa beekamaa, kan jiruu daldalaa Bunaatiin jiraatu ture. Humni diinaa baatii darbe qabeenya isaa hedduu ibiddaan jalaa mancaasee ture.
Jaalli kutataan kun qabsoof jecha maatii isaa facaase, falmaa keessa oruu jiruu wareegame.
Lubbuun isaa nagaan haa boqotu!
Yunvarsiitiin Wallaggaa seenaa Afaan Oromoo keessatti isa jalqabaati kan jedhame barattoota afur Afaan Oromoon sadarkaa digirii sadaffaatti barsiisee eebbaaf qopheesse.
Kana dura yunivarsiitiin barnoota Afaan Oromoo sadarkaa PhD’n barsiisee qorannoo barreessufis ta’e bu’aa qorannoo dhiyeessuufis afaanichumaan fayyadamuun fiixaan bahe kan jalqabaati jedhameera.
Pirezidantiin yunivarsiitichaa Dr Haasan Yuusuf ‘barattoonni afur qorannoo isaanii yeroo jalqabaaf Afaan Oromoon dhiheessuun seenaa dalagani’ jechuun fuula Fesbuukii isaaniirratti barreessan. Qorattoota afur Yunvarsiitiin Wallaggaa yeroo jalqabaatiif sadarkaa digirii sadaffaa (PhD)tiin Afaan Oromoon barsiisee eebbaaf qopheesse keessaa tokko Dr. Margaa Gammadaadha.
Sadarkaa dippiloomaarraa kaasee Afaan Oromoo barachaafi qorachaa hanga PHD Afaan Oromootiin hojjechuurra kan gahe.Doktar Margaan waraqaa qorannnoo dhiyeessanitti gammachuu qabu.‘Ilmaan Oromoo guddina afaanichaaf aarsaa guddaa itti kaffalaniru, nuti bu’aa isaati, dhalatoof bu’aa akka buusnu carraa argannerra, anis hiriyoonni koos gammanneera’ jedhan.
Guutuun gabaasa kanaa kunooti: https://bbc.in/3jtsC1N
#Ethiopia latest Court updates: Guyo Wario’s bail approved; charges to be filed against Dejene Tafa;
Naannoon Tigraay filannoo torban dhufu gaggeeffamuf qophaa’u beeksise